नेपाल आज | उपेन्द्र यादव जेल जान्छन्, बाबुराम प्रधानमन्त्री हुन्छन् (भिडियोसहित)
उपेन्द्र यादव जेल जान्छन्, बाबुराम प्रधानमन्त्री हुन्छन् (भिडियोसहित)
मधेशी नागरिक समाजका संयोजक गणेशकुमार मण्डल निकट भविष्यमै मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन हुने र यसले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै समाप्त गर्ने दावी गर्छन् । उनका अनुसार चाँडै मुलुकमा धार्मिक युद्धको अवस्था उत्पन्न हुने र त्यसपछि शासन सत्ता सेनाले हातमा लिने छ ।
नेपाल आजसंगको कुराकानीमा संयोजक मण्डलले राष्ट्रिय राजनीति र मधेश केन्द्रीत दलहरुका विषयमा केही गम्भीर तथ्य खुलाएका छन् । ती मध्ये केही महत्वपूर्ण अंश यस्ता छन् :
क) प्रदेश नम्बर २ अर्थात मधेशमा आफूलाई मधेश केन्द्रीत भन्ने समाजवादी पार्टी र राजपाको अस्तित्व समाप्त हुँदैछ । मधेशको नाममा आफू धनी बने तर त्यहाँका जनतामाथि शोषण मात्र गरे । यो कुरा जनताले बुझिसके ।
ख) गौर हत्याकाण्डबाट उदाएका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जेल जाने निश्चित छ । उनले मधेशी जनता र आफना मालिक (ओली र प्रचण्ड) लाई समेत धोका दिएका छन् । दोहोरो चेपुवामा परेका उपेन्द्रविरुद्ध अब गौर हत्याकाण्ड र उनले गरेको भ्रष्टाचारको फाइल खुल्न थालेको छ ।
ग) उपेन्द्र यादवले सधैं झूठ बोलेर सत्ताको स्वाद चाखे । उपेन्द्रले भनेको के कुरा पूरा भयो ? उनले एक मधेश एक प्रदेश भने, पूरा भयो ? समावेशी समानुपातिक भने पूरा भयो ? पछि गएर एक मधेश दुई प्रदेश भने, पूरा भयो ? संविधान पुनर्लेखन भयो ?
घ) चर्का नारा लगाएर मधेशमा आन्दोलन उछाल्ने, मधेशी जनतालाई शहीद बनाउने अनि आफू मन्त्री बन्ने उपेन्द्रको जेल यात्रा कसैले रोक्न सक्दैन ।
ङ) उपेन्द्र जेल गएपछि डा. बाबुराम भट्टराईको भाग्य खुल्छ । समाजवादी पार्टी उनैले चलाउँछन्, उनी प्रधानमन्त्री पनि बन्छन् ।
च ) राजपा चाँडै सरकारमा जान्छ । सरकारमा नगए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सो पार्टीका नेताविरुद्ध एक्सन लिन्छन् । त्यो भनेको उनीहरुले गरेको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने हो । जेल जानु भन्दा राजपा आफनो चरित्र अनुसार सरकारमा जाने छ ।
छ ) राजपाले सरकारमा जान राखेका कुनैपनि शर्त पूरा हुँदैनन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुँदैन र रेशम चौधरी पनि रिहा हुँदैनन् । यसका बावजुत् उनीहरु सरकारमा जानेछन् ।
ज ) यदि सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहा गरे नेकपा समाप्त हुनेछ । नेकपाका हरेक तहका कमिटीमा मारामार हुनेछ ।
झ ) टिकापुर घटना र गौर काण्डमा के फरक छ ? यी दुवै घटना शान्ति प्रक्रिया भित्र पर्दैनन् । दुवै आपराधिक घटना हुन् । एउटै प्रकृतिका घटनामा रेशम जेल जाने, उपेन्द्र मन्त्री हुने ?
ञ ) प्रदेश २ मा राजपा र समाजवादीले चलाएको सरकार पूर्णतः असफल भैसक्यो । त्यहाँ जंगली राज छ । कुनै नीति, नियम, कानुन छैन । भ्रष्टाचार मात्र छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने प्रदेश २ सरकार भ्रष्टाचारको विश्वविद्यालय हो । कसैलाई भ्रष्टाचार कसरी गर्ने भन्ने सिक्नु छ भने प्रदेश २ मा गए हुन्छ ।
ट ) यदि मधेशी शक्ति बलियो बनाउने हो भने समाजवादी, राजपा, हृदयेश त्रिपाठीको स्वतन्त्र अभियान, सिके राउत, लक्ष्मण थारु लगायतको समूह एकै ठाउँ उभिनुपर्छ । सबै शक्ति एक भएर टुँडीखेलमा एउटा कार्यक्रम गरुन त, यो देशको राजनीतिक नक्शा नै परिवर्तन हुन्छ । के यी नेताहरु आपसमा मिल्न सक्छन् ?
ठ ) मुलुक सही ढंगले चलेको छैन । केन्द्र सरकारले पनि उत्पादनमा ध्यान दिएको छैन । मागेर देश चल्दैन । बेरोजगारी बढ्न्, महंगी हुनु, असुरक्षा बढ्नु सबै आर्थिक संकटका परिणामहरु हुन् । यीनले जनआक्रोश बढाएको छ ।
ड ) अब हुने भनेको धार्मिक द्वन्द्व हो । पहाडी र तराई क्षेत्रमा बढी यसको अशर पर्नेछ । यसले समाजलाई अस्तव्यस्त पार्नेछ । त्यो बेला सेनाले शासन सत्ता हातमा लिन सक्छ ।